VIP သမားတငိင်း နက်ဖလစ် တစ်ခုစီရပြီ ဖတ်ပေးပါ
mobilebankingနဲ့ဖုနျးဘလှေဲလို့ရပါပွီတဈသောငျးဖိုးအနညျးဆုံးဝယျရမယျ သူမြားဖုနျးထဲလှဲပေးရတာမို့စခရငျရှော့ပွကိုပွရပါမယျvip ဖွဈခငျြရငျ [email protected] ကို စာပို့ဆကျသှယျပါ တဈလ ၅၀၀၀ သုံးလ ၁၀၀၀၀
doctormalay.com မနျဘာဝငျမြား အတှကျသာ ဝဘျဆိုကျနဲ့ ပတျသတျသမြှ
VIP သမားတငိင်း နက်ဖလစ် တစ်ခုစီရပြီ ဖတ်ပေးပါ >
Cracking Accouts Supporter.
09-23-2019, 05:58 PM (This post was last modified: 09-23-2019, 07:31 PM by Administrator.)
အကောင့် တစ်၇ာ့ငါးဆယ်၇ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ random ပါ။ အကြည်လား အ၇မ်းအကြည်လား မသိ၇သေး။ ကံကောင်းသူအကြည်၇မှာပဲ။
တစ်ယောက်ကို တစ်ခု ရမယ်။ အဲ့ကောင်က ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ auto buy ပါ။ ပိုင်၇ှင်ဝယ်နေသမျှ ခင်ဗျားတို့လည်း သုံးလို့ရနေမယ်။
vip သမားတိုင်းက https://doctormalay.com/showthread.php?tid=2909 ဒီမှာ စာဝင်ရေးပါ တစ်ယောက်ကို တစ်ခု ၇ပါမယ်။ နက်ဖလစ်ဘာလဲဆိုတာ သိကြတယ်နော်။ လက်မသရမ်းပါနဲ့။ ငါတို့လည်း ၇ှာ၇တာ အ၇မ်းခက်တယ်။ ငါးထောင်ပေး၇တာနဲ့ တန်အောင် လုပ်ပေးချင်တယ်။ အများကြီးပေးချင်တယ်။ လက်မသ၇မ်းနဲ့ ဖင်မယားနဲ့ အေးဆေးလေးပဲ ကြည့် ကံကောင်းလို့ မင်းတို့၇တဲ့ အကောင့်၇ဲ့ ပိုင်၇ှင်က အမြဲတမ်းဝယ်နေ၇င် အမြဲတမ်းကြည့်ရမယ်။ တစ်ခုရှိတာက hd uhd အကြည်လား အရမ်းအကြည်လားဆိုတာ အာမမခံဘူး basic လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကံတ၇ားပဲ။ အကောင့်ဝင်လို့ မ၇တော့၇င် ချက်ချင်းပြောပါ တက်နိုင်သလောက် လဲပေးမယ်။ vip သမားတွေကို ဦးစားပေးမယ်။ သာမာန်မန်ဘာတွေအတွက် မဲဖောက်ဖို့လည်း ၇ှိတယ်။ vip အမြဲဝယ်ကြပါ တန်ပါတယ်။ ငါတို့လည်း ဖုန်းကတ်လေးတွေေ၇ာင်းပြီး တက်နိုင်သလောက် အားတဲ့ အချိန် အကောင်းဆုံးတွေ လုပ်ပေးတယ် အလုပ်ထဲမှာလည်း ခိုးလုပ်ပေးမယ်။ အိမ်ပြင်မှာလည်း ဖုန်းနဲ့လုပ်ပေးတယ်။ ဝယ်ကြကွာ.. မောတယ်။
တစ်ခု ၇ှိတယ်။ အကောင့်တွေကို မြန်မြန်တောင်းထား ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခု rip ဆိုက်တစ်ခုကို vip သမားတွေအတွက် လုပ်နေလို့ 
အောက်စလွတ် စကတ်တွေကိုတော့ vip elite မှာပဲထားမယ်။ ငိုးမတွေက လျှောက်ဖြန့်တယ်။ မျက်နှာပါတာတွေကို။
Likes Received: 457 in 285 posts
09-23-2019, 07:11 PM (This post was last modified: 09-23-2019, 07:12 PM by Administrator.)
ဒါတွေကြောင့် ချစ်နေရတာ။ တန်တယ်။ gfC တွေ ရရင်လည်း လုပ်ပါ vip တွေကိုပေးချင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ RIPဆိုက်တွေကို လင့်လုပ်တော့.။ RDP ကောင်းကောင်းလေးရပါစေ။ သင်တန်းဖွင့်တော့လေ... ဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူး ဟီး BTC သူ့ဘာသာသူရောက်လာတဲ့ နည်းလေးများမရှိဘူးလား။ ပွန်းအကောင့်လေးတွေတင်ဦးနော်။ ETH တွေ ပို့ထားတယ်။ ရေပွက်အကြီးစားကြီး ပျောက်ရင် နှစ်ချို့.. သိတယ်။ အောက်ဈေးမဟုတ်မှန်း
@ smack back
mobile banking နဲ့ ဖုနျးဘလှေဲလို့ရပါပွီ တဈသောငျးဖိုး အနညျးဆုံးဝယျရမယျ သူမြားဖုနျးထဲ လှဲပေးရတာမို့ စခရငျရှော့ ပွကိုပွရပါမယျ
vip ဖွဈခငျြရငျ [email protected] ကို စာပို့ဆကျသှယျပါ တဈလ ၅၀၀၀ သုံးလ ၁၀၀၀၀ MPT
IF U ASK FOR UNDER AGE OR YOU UPLOAD UNDER AGE... WE JUST BAN AND REPORT YOUR IP. TAKE CARE FUCKER. WE NEED MONEY FOR THIS SITE'S SERVER FEE. DO NOT TELL ABOUT MONEY FOR THAT. FUCK YOU.
နက်ဖလစ် အကောင့် လက်ဆောင် ကံစမ်းမဲ smack back 17 6,119 09-29-2019, 09:23 PM
Current time: 06-01-2020, 12:36 PM Powered By MyBB, © 2002-2020 MyBB Group.